Guddiga Doorashooyinka Qaranka oo xafiis cusub ka furanaya Dhuusamareeb – Kalfadhi
Guddiga Doorashooyinka Qaranka oo xafiis cusub ka furanaya Dhuusamareeb
Guddiga Madaxa-banaan ee Doorashooyinka Qaranka (GMDQ) ayaa u jooga magaalada Dhuusamareeb inuu ku wargeliso Maamulka Galmudug inuu guddigu ka furto halkaas Xafiiskiisa. War lagu soo daabacay Bogga Guddiga ayaa lagu sheegay inuu arrinkaas aqbalay Madaxa Xukuumadda Galmudug, Sh. Maxamed Shaakir, oo Guddoomiyaha GMDQ, Xaliima Ismaacil Ibraahim (Xaliima Yarey), ay la kulantay maanta.
“Guddoomiye Xaliimo ayaa faahfaahisay in ay Galmudug u yimaadeen furitaanka Xafiis Goboleedka Guddiga ee Dhuusamareeb” ayaa lagu yiri warkaas lagu soo daabacay Bogga Guddiga. Guddigu waxa uu sheegay in, si ay u furtaan xafiiskaas, ay maalmaha soo socda u joogi doonaan halkaas shaqaaleysiinta xubnihii ka shaqeyn lahaa xafiiskiisa cusub.
Madaxa Xukuumadda Galmudug, Sh. Maxamed Shaakir, ayuu Guddigu sheegay inuu ka mahadceliyey xafiiskaas, “wuxuuna balan qaaday” buu yiri “inuu la shaqeyn doono Guddiga”. Warkaas Guddigu baahiyey waxaa, sidoo kale, lagu sheegay inuu Sh. Shaakir ku balan-qaaday ineysan Galmudug wax faragelin ah ku sameyn doonin furashada xafiiska cusub ee GMDQ.
“Waxa uu balan qaaday in Galmudug ay Guddiga kala shaqeyn doonto in ay ka soo baxaan waajibaadkooda, uuna xaqiijin doono in hawsha shaqaaleynta ay u yimaadeen Dhuusamareeb ay u qabsan doonaan si madax-banaan, oo aysan cidna faragelin doonin” ayuu yiri Guddigu. “Sheekha ayaa Guddiga u soo jeediyey dardaaran dhaxal gal ah” ayuu sii raaciyey warkiisa.
Waxa uu GMDQ sheegay inuu Madaxa Xukuumadda Galmudug ugu baaqay midnimo iyo cadaalad ay ku wajahaan shaqada qaranka. “Shabaabka roobkoodu waa tafaraaruqa dadka Soomaaliyeed, abaartooduna waa midowga iyo isku duubnida dadka. Sidaasdaraadeed, midowgu waa noo muhiim, si aan uga adkaano Al-Shabaab” ayuu Sh. Shaakir yiri buu yiri Guddiga Madax-banaan ee Doorashooyinka Qaranka.
GMDQ waxa uu horay uga soo furtay xafiisyadiisa Xarumaha Dowlad Goboleedyada Puntland iyo Koofur Galbeed Soomaaliya (KGS), iyada oo uu qaatay shaqaalihii ka shaqeyn lahaa xafiiskiisa Hirshabeelle, waxa uuna tilaabadiisa 4-aad u qaaday inuu ka furto xafiis Galmudug, iyada oo uu doonayo inuu ugu dambeyn xafiiskiisa 5-aad ka furto magaalada Kismaayo, inta lagu guda jiro sanadkan.
Xildhibaan Nimco oo haweenka Puntland u jeedisay in ay isku-xirnaan muujiyaan si ay kaalin uga helaan siyaasadda
Warbixin: Dowladda iyo Al-Shabaab ma awoodaan in ay wada-hadlaan?